ISILO sithi sesibone futhi safunda lukhulu – Ubukhosi
Home/ Umlando Wethu/ISILO sithi sesibone futhi safunda lukhulu
ISILO sithi sesibone futhi safunda lukhulu
Ubukhosi News December 16, 2015
Ongangezwe Lakhe uthi okwenzeke esikhathini esedlule kumcijise kakhulu kwamenza wakwazi ukumelana nezimo ezinzima
INgonyama uBhekuzulu (Isithombe: Bayede Publications)
‘IMINYAKA engamashumi amane nane akuyona into yokudlala’. Lawa ngamazwi ashiwo yiSILO ngesikhathi sethula inkulumo yokugubha iminyaka engama-44 siseSihlalweni. Le minyaka ingumlando ngoba yenza Ongangezwe Lakhe abe ngobuse isikhathi eside elandelwa yiNgonyama yakwaNodwengu uMpande kaSenzangakhona.
“Kunoma yisiphi isidalwa sikaNkulunkulu siyafika isikhathi lapho sizibuza ngalokho okuyinhloso kaNkulunkulu ngempilo yaso. Lokhu kusuke kwenzeka lapho isidalwa esingumuntu sibuka njengebhayisikobho konke lokhu okusuke kwenzeke empilweni, okungamazombezombe. Ngalesi sikhathi kawugcini nje ngokubona kanjalo nokubabaza umusa kaNkulunkulu empilweni yakho. Kokunye uze uphimise amazwi omhlabeleli lapho ethi ‘Namhla Nkosi siyamangala uma ngibheka emuva’, kusho Ongangezwe Lakhe.
Omdala uqhubeke wathi “Nami kule minyaka engama-44 uNkulunkulu engivikele eSihlalweni sikaZulu. Kuningi engithi nxa ngikubuka ngibone umusa kaNkulunkulu uziveza kimi. Kulolu hambo kuningi engikufundile ngoba uNkulunkulu ngisemncane ungenze ngangaba yingane yomzali othize kepha ngaba ngowesizwe. Yebo lapho ethatha iNdlovukazi ngesikhathi ngineminyaka elishumi nje vo kuzwakala kubuhlungu kulunya nosizi . Kepha uma ngibheka emuva lapha ngibona isifundo esimangalisayo ayengifundisa sona ngempilo. Ngineminyaka elishumi ngabe sengazi ukuthi umzali akuyena lowo owavundla okhalweni lwakhe. Yikho ngakhuliswa ngomama lapha eNdlunkulu, iNdlovukazi engavundla kuyo isiye kwelemimoya.” ISILO sizalwa yiNdlovukazi uThomozile Jezangani, okaNdwadwe amathambo akhe alele endaweni yaseMkhumbane, eThekiwini.
Enkulumweni yakhe Ongangezwe Lakhe ukhulume nangokwedlula emhlabeni kweNgonyama uBhekuzulu kaMaphumuzana okunguyise osizalayo kanye nangokuphila ngaphansi kombuso wobandlululo. “Ukuhamba kweSILO esingizalayo sisesincane kanjalo nami ngisemcane kwabukeka kulusizi olumangalisayo. Kepha lapho ngibuka emuva, ngiyembulelwa ukuthi konke kwakwenzelwa ukungicijela isikhathi esizayo. Ngibe nenhlanhla yokuzalwa ngesikhathi lapho umbuso wamaNeshinali uqala ngonyaka we-1948, kwathi ngesikhathi lapho lo mbuso usunamandla usudla lubi ngonyaka we-1971 ngahlala eSihlalweni esafungelwa ngoyihlo endulo, ngaba nguMvikeli woMphongolo wesivumelwano sikaZulu osewalala, ophilayo nosazo zalwa. Konke lokhu kwakuyizifundo engangicijelwa zona okuyisikhathi esikuso namuhla,” kwenaba iSILO.
Izilingo zibe khona
Zibe zimbili izinto esithe ISILO zibe yisilonda kuso kule minyaka engamashumi amane nane: “Kule minyaka engama-44 kuningi okube yizithunywa zokungisondeza kuNkulunkulu kwabanye okwakungabukeka njengezilingo. Kweziningi nje engingazibalula kwaba yilapho uZulu udlana wodwa umkhonto ugwaza ekhaya odlameni olwedlula nemiphefumulo engaphezu kwezinkulungwane ezingamashumi amabili, odlameni lapho abe-ANC nabe-IFP babelwa khona kwaZulu-Natal nasezingxenyeni zeGoli. Lokhu kwaba buhlungu kimi ngoba njengohleli eSihlalweni kwakuxebuka kimi qobo. Okunye okwaba buhlungu kule minyaka engama-44 wukubona abantu bakababa abancane nabadala bebhuqabhuqwa yisifo segculazi nesandulela sayo. Lokhu nanamuhla kusankenketha kimi ngoba bonke lobu buhlungu buya kimi enhliziyweni.
Nokho akubanga kubi konke
Omdala uphethe ngokuveza ukuthi nokho isithombe seminyaka engamashumi amane nane asibanga wusizi kuphela kepha kube khona okuhle okungakhelwa kukho. Lapha ubalule ubudlelwane naMakhosi kanye nobunye esizweni.
“Ubudlelwane bami naMakhosi ezizwe kanjalo nokuhlonipheka kweSihlalo yinto engenza ngiziqhenye ngokuba yiNkosi yenu. Lobu budlelwane busekelwe wuthando, wukuhloniphana kanye nokuthanda ubuthina, okungamasiko namagugu ethu. Lokhu ngiyethemba ukuthi kungoba abantu abangisabi kepha bayangihlonipha njengoba nami ngibahlonipha nje. Lokhu kumqoka ngoba siphila ezikhathini lapho abantu bejabulela ukusatshwa kunokuba bahlonishwe ngendlela abaziphatha ngayo kubantu.
EMakhosini ezizwe nasesizweni jikelele ngithi ngiyabonga Zulu ondlela zimhlophe, ubunye bethu buyisifundo e-Afrika yonkana futhi bukhulu ubufakazi obuqoshwe ngezingazi zawokhokho benu ekuthini uZulu uba namandla nxa ubumbene. Yikho ngihlale ngisho nje ukuthi ‘Hlangana mhlathi owazanayo!’,” kusho ISILO. Siphethe ngokuthi: “Ubunye bethu bugqame kakhulu lapho isandla somubi sizama ukuninda iSihlalo ngehlazo lapho kunabantu ababhala amalumbo okuthi enkulumweni engayenza oPhongolo ngabe ngigovuza ubutha nenzondo. Nalapha ngiyambonga uNkulunkulu ngoba umbiko okhishwe yiHuman Rights Commission uyaliveza iqiniso njengoba ungananazi ekuthini inkulumo yami yahlanekezelwa. Nokho angikho lapho okwamanje ngoba konke ngizokukhuluma neSizwe eSandlwane ngoMasingana. Ukwenza njalo kumqoka ngoba kwakungemina engabe ngethukwa kepha kwakuyiSihlalo senu Zulu ophilayo nosewalala, yikho ngithi konke ngalolu daba ngizokukhuluma kini eSandlwane,” kuphetha Ongangezwe Lakhe.
Okulandelwayo uma kuthomba umfana ngokwesintu